Các tác giả tác phẩm nổi bật trong phong trào thơ mới | Anybook.vn - Anybook
Các tác giả tác phẩm nổi bật trong phong trào thơ mới | Anybook.vn
Hoy i Hoai Thanh sy Hoai Chan, raha namintina ny hetsika tononkalo vaovao: “Tsy azo takarina araka ny famaritan’Andriamatoa Phan Khoi. Ny andininy maimaim-poana dia ampahany kely amin’ny tononkalo Vaovao. Ny Hetsiky ny Tononkalo Vaovao dia voalohany indrindra dia fanandramana feno fahasahiana hamerenana ny fenitra taloha”
Hetsika tononkalo vaovao no vanim-potoana ambony indrindra teo amin’ny tantara literatiora vietnamiana miaraka amin’ny fisehon’ireo anarana lehibe maromaro. Io no vanim-potoana izay miteraka ny tena maha-zava-dehibe ny literatiora miaraka amin’ny fahatsiarovan-tena lalina. Nisy andianà fanavaozana feno fahasahiana nitondra ny literatiora vietnamiana ho eo amin’ny faratampon’ny zavakanton’ny teny. Azo lazaina fa tsy manohitra na mandà ny fandraisan’anjaran’ny tononkalo taloha ny hetsika tononkalo vaovao, fa vao mainka mampitombo ny soatoavina nentim-paharazana. Io ihany koa no vanim-potoana nanatri-maso ny firoboroboan’ny asa miavaka sy ny poeta miavaka amin’ny literatiora vietnamiana.
1 1. Xuan Dieu
2 2. Han Mac Tu
3 3. Che Lan Vien
4 4. Huy Can
5 5. Nguyen Binh
1. Xuan Dieu
Ao amin’ny zaridaina voninkazo manitra ny hetsika poetika vaovao, Xuan Dieu Voninkazo mamirapiratra indrindra foana. Tao aminy ny fanahin’ny lehilahy iray izay nalahelo talohan’ny vanim-potoana mahasosotra, ary koa ny famirapiratan’ny fo izay mihetsiketsika sy mafana fo foana. Xuan Dieu dia heverina ho vaovao indrindra amin’ireo poeta vaovao noho ny fanavaozana feno fahasahiana nataony na ny atiny na ny zavakanto. Talohan’ny Revolisiona aogositra, ny tononkalon’i Xuan Dieu dia naneho toe-po roa toa mifanohitra: fitiavana ny fiainana, fahazotoana amin’ny fiainana, ary amin’izany fotoana izany dia tena kivy, maneso ary manirery. Ireo toe-po roa ireo dia mifandray amin’ny antony. Ny fitambarana tononkalo roa voalohany, tononkalo ary fandefasana emboka manitra ho an’ny rivotra, dia nitondra ny literatiora ao amin’ny firenena ho fandraisana anjara lehibe ho an’ny revolisiona poetika tamin’ny vanim-potoana 1930-1945, nampiseho fanavaozana sahisahy maro. Raiso ny ampahany tsara amin’ny tononkalo an’ohatra frantsay miaraka amin’ny idealy ara-esthétika mandroso: mandray ny olombelona ho fenitra amin’ny hatsarana,
Poeta variana amin’ny fotoana i Xuan Dieu, ary manana fahatsapana lalina ny maha-izy azy. Mivavaka amin’ny soatoavin’ny olombelona izy, mangetaheta mafy ny fiainana ary maneho angovo tsara be dia be foana. Izy koa dia poeta fitiavana tena tsara tamin’ny tononkalo angano. Ny sanganasany malaza indrindra dia ny “Faingana”, tononkalo mampiseho mazava ny fomba kanto ataon’ny poeta:
Hijery misimisy kokoa: Tononkalo Fitiavana tsara indrindra nataon’ny Poeta Xuan Dieu
2. Han Mac Tu
Han Mac Tu dia poeta manana fomba manokana, dia variana amin`ny sarin`ny ra – fanahy – volana. Fanahin’ny poetika hafahafa ka heverin’ny olona ho poeta adala. Mamaky tononkalo koreana ny poeta dia mahita fanahy iray izay tia ny fiainana, tia ny tontolo iainana, tia ny olona hatramin’ny faniriana sy ny fandoroana; faniriana mafy ny hiaina hatramin’ny fanaintainana mafy. Ny sasany amin’ireo tononkalo farany teo amin’ny fiainan’ilay poeta Han dia miraikitra amin’ny sary matoatoa ihany koa – mariky ny fanaintainana sy ny fijaliana eo amin’ny vatana sy ny fanahy. Krizy ara-tsaina, fahatapahan-kevitra ary famoizam-po mialoha ny fiainana.
Ny faniriana ho velona sy ny fankahalana ny fiainana dia mifamatotra, ny sangan’asan’ny poeta dia misy alahelo foana eo amin’izao tontolo izao. Loza ny fiainan’i Han Mac Tu, ho an’i Han Mac Tu, miaraka amin’ny loza ny zavakanto. Ny asany rehetra dia voadio tamin’ny rany sy ny ranomasony. Na ny tononkalo mahafaly indrindra aza dia misy alahelo. Io no fanahy poetika hafahafa indrindra amin’ny hetsiky ny tononkalo vaovao, sarotra hazavaina ary toa tsy azo idirana. Ny asany malaza indrindra dia azo lazaina ao amin’ny hira “Lohataona Sivy”:
Maninona raha miverina any @ vohitra Vi ?
Ny andalana vaovao miposaka masoandro miposaka.
Ny zaridainany maitso toy ny jade
Saron’ny ravina volotsangana mitsivalana ny endri-tsoratra feno.
Ny rivotra manaraka ny rivotra, ny rahona manaraka ny rahona,
Mampalahelo ny rano, mihozongozona ny katsaka…
Iza ilay sambo nianjera tamin’io renirano volana io,
Mbola mitondra volana anio alina?
Mo Guest distance, vahiny lavitra
Fotsy loatra ny lobako ka tsy hita…
Zavona ny zavona eto
Iza no mahalala ny bold?
Hijery misimisy kokoa: Ny tononkalo tsara indrindra an’ny poeta Han Mac Tu
3. Che Lan Vien
Che Lan Vien mitovy amin’ny fomban’i Han Mac Tu. Samy mikorontan-tsaina ireo poeta roa ireo amin’ny tontolo mahatahotra noforoniny. Che Lan Vien dia variana amin’ny tilikambon’i Cham, ireo “matoatoa mifampitsapatsapa”, mahatonga ny mpamaky hangovitra rehefa mankafy. Talohan’ny Revolisiona aogositra, ny tononkalon’i Che Lan Vien dia tontolo iray amin’ny tena hevitry ny hoe “sekolin’ny tononkalo misavoritaka”: “horohoro, mistery, fahatapahan’ny vanim-potoanan’ny Fahalovana miaraka amin’ny taolana, rà, karandoha, sehatra rava, miaraka amin’ny tilikambo Cham”. Loharanon’ny aingam-panahy ho an’i Che Lan Vien ny tilikambo “rava” Cham. Amin’ny alàlan’ny faharavana sy ny horohoro ao amin’ny tononkalon’i Che Lan Vien no ahitantsika ny aloky ny fanjakana matanjaka amin’ny vanim-potoanan’ny volamena, miaraka amin’ny nostalgian’ny poeta.
Taorian’ny Revolisiona Aogositra, ny tononkalony dia “tonga teo amin’ny fiainan’ny vahoaka sy ny firenena, feno hazavan’ny revolisiona”, ary nisy fiovana miharihary. Nandritra ny vanim-potoana 1960-1975, ny tononkalo Che Lan Vien dia nahatratra ny fironana amin’ny epic mahery fo, fanehoan-kevitra ara-politika, ary lohahevitra sahisahy. Ny asany malaza indrindra amin’ny hetsika tononkalo vaovao dia azo lazaina ho “Lohataona”:
Tsy miandry aho, tsy miandry
Hitondra alahelo bebe kokoa ve ny lohataona?
– Amiko dia tsy misy dikany daholo izany
Tsy inona izany fa fijaliana!
Izay niverina tamin’ny fararano lasa teo
Angony ho ahy ny ravina volamena?
Miaraka amin’ny voninkazo vaovao dia mihintsana ny felany rehetra
Avia atỳ, ento ny loharano ho eo am-baravarana!
Iza no mahalala fa ao anaty nofy ny fanahiko
Ny hevitra hanangona indray mba hisorohana ny fitiavana lohataona?
Misy mahantra tsy mahalala an’i Tet
Ataovy ny akanjo fararano!
Misy zaza tsy mahay mitomany
Oay! Mba tsarovy! Mba tsarovy ô!
Vorona very amin’ny faran’ny arivo
Hijery misimisy kokoa: Ny tononkalo tsara indrindra nataon’ny poeta Che Lan Vien
4. Huy Can
Huy Can Amin’ny maha-poeta alahelo an’arivony taona azy, dia mitondra alahelo lalina ao aminy izy. Ny asany rehetra dia milentika ao amin’ny dobon’ny alahelo, ny varotra mihozongozona, ny fahaleovan-tenan’ny olona. Na taiza na taiza nijery azy dia nahita alahelo tamin’ny zava-drehetra, fanirery tafahoatra. Ny poeta dia tsy manadino ny fahabangana ao am-pony, manenjika ny fialana amin’ny zava-misy mankany amin’ny mahery. Ny tononkalon’i Huy Can tsirairay dia manana fomba manokana ary misy zavatra iray iraisan’izy ireo: fahafoizan-tena sy filozofia. Solontena tena tsara amin’ny hetsiky ny tononkalo vaovao izy miaraka amin’ny fanahin’ny poetika manahiran-tsaina.
Ny tononkalony dia fitambarana mirindra ny klasika sy maoderina, taloha sy vaovao. Mampiasa ireo endri-javakanto amin’ny tononkalo taloha izay hanavaozana ny fomba fanaony manokana. Mendrika ho iray amin’ireo poeta mahazatra amin’ny hetsika tononkalo vaovao i Huy Can. Feno alahelon’olombelona, ​​fanaintainan’ny fiainana ny tononkalony. Nanaitra ny fanahin’ny alahelon’i Azia Atsinanana ilay poeta … namelona indray ny fizaran-tany malahelo izay nafenina nandritra ny an’arivony taona maro teto amin’ity tany ity (Hoai Thanh). Ny alahelo dia vokatry ny fihainoana amim-pitandremana ny gadon’ny tsingerin’ny cosmic sy ny alahelon’olombelona. Izany no fo … malahelo, malahelo, orana. Ny firenena iray ihany fa alahelo mavesatra renirano sy tendrombohitra. Ny asany tsara indrindra dia ny “Trang Giang”:
Hafatra mampahory ny onja,
Ny sambo dia midina amin’ny rano mifanitsy.
Niverina tany an-tsaha ilay sambo, tamin’ny lalana an-jatony nampahory;
Kitapo maina sampana misy andalana vitsivitsy.
Ny tononkalo kely manirery an’ny rivotra,
Aiza ny feon’ny tanàna lavitra ny tsenan’ny tolakandro.
Milentika ny masoandro, lalina ny lanitra;
Hira lava, lanitra midadasika, fiantsonana manirery.
Aiza no hivezivezena, andalana manaraka andalana;
Lehibe tsy misy sambo hiampita.
Tsy mangataka firaisana,
Mangina, mihaona amin’ny tora-pasika mavo ny morontsiraka maitso.
Ny rahona avo dia avo mandrakotra ny tendrombohitra volafotsy,
Vorona kely manana elatra: aloky ny hariva.
Mivonto rano ny fon’ny firenena,
Ny filentehan’ny masoandro tsy misy setroka koa dia manina an-trano.
Hijery misimisy kokoa: Ny tononkalo tsara indrindra sy malaza indrindra an’ny Poeta Huy Can
5. Nguyen Binh
Rehefa variana amin’ny zava-baovao feno fahasahiana ny poeta vaovao, seho fitiavana mahery vaika ary fiainana mikorontana, Nguyen Binh tapa-kevitra ny hitady tontolo ho azy manokana, hiverina amin’ny soatoavina nentim-paharazana izay mbola saro-pantarina amin’ny hira folk. Nanoratra betsaka momba ny fitiavana, fitiavana tsotra tao an-tanàna, malemy fanahy sy tso-po. Saingy nanoratra bebe kokoa momba ny alahelo izy, izay toe-tsain’ny zokiolona iray mitodika ny lasa, mahita fa ny soatoavina ara-kolontsaina nentim-paharazana dia nanakoako fotsiny izao. Aminy dia mety efa lasa ny kolontsaina nentim-paharazana fa tsy ny lasa.
Ny tononkalon’i Nguyen Binh dia maneho faniriana mafy hamerenana ireo soatoavina ireo, sady maneho fiaraha-miory sy fanenenana amin’ny kolontsaina efa ho faty, na dia mikiakiaka aza ianao, dia tsy zakanao izany, ny fandehan’ny fotoana tsy fidiny. I Nguyen Binh dia manana lalana hafa tanteraka amin’ireo poeta vaovao, tsy tia mahita zavatra hafahafa, fa miziriziry fotsiny amin’ny maha mpiray tanindrazana marina. Ny sanganasany miavaka dia azo lazaina ho “Ny ambanivohitra”, asa iray mampiseho mazava ny firongatry ny fotoana:
Omaly aho no niverina avy any amin’ny faritany
Andraso aho hijanona eo an-tampon’ny dobo tanàna
Ny velvet scarves dia mitabataba
lobaka kibo, nandratra ahy ianao!
Aiza ny bib landy oaka?
Ny fehin-kibo nolokoina tamin’ny lohataona?
Aiza ny lobaka efatra?
Vava goaika servieta, pataloha mainty mamafy?
Matahotra ny hilaza aho fa matahotra ny ho very anao
Miangavy anao aho mba hihazona ny ambanivohitra
Toy ny andro nandehanako tany amin’ny tempoly
Miakanjo fotsiny araka izay tianao
Voninkazo voasarimakirana mamony eo afovoan’ny zaridaina voasarimakirana
Ny mpampianatra irery no miaraka aminay any ambanivohitra
Nitsoaka na latsaka ny fofon’ny rivotra tao an-trano.
Ny hetsika poetika vaovao dia tena faratampony amin’ny zavakanto, tao anatin’ny fotoana fohy, saingy namaky ny lasitra tery amin’ny literatiora taloha, nanamarika ny fivoaran’ny literatiora vietnamiana, ny vanim-potoanan’ny ego, ny maha-izy azy sy ny fiheveran-tena.
Previous: [Review Phim] Bird Box – Tác Phẩm Gợi Lên Sự Tiếc Nuối | Anybook.vn
Next: Tài liệu srs là gì, khái niệm mà bất cứ BA nào cũng phải thuộc lòng | Anybook.vn